ခြံ ၊ မြေကွက် | Categories | Myanmar Realestate Portal
ခြံ ၊ မြေကွက်
Properties listed in "ခြံ ၊ မြေကွက်"
ခြံရောင်းမည် ဘိုးဘွားပိုင်မြေ မစိုးရိမ်လမ်းသွယ်၃ ခြံအမှတ် ၅၀၈ ထောင့်ကွက် မိုးဆေးခန်းဘေးလမ်း ၁၀ မိုင်
ဘိုးဘွားပိုင်မြေ မစိုးရိမ်လမ်းသွယ်၃ ခြံအမှတ် ၅၀၈ ထောင့်ကွက် ...
ဘိုးဘွားပိုင်မြေ မစိုးရိမ်လမ်းသွယ်၃ ခြံအမှတ် ၅၀၈ ထောင့်ကွက် မိုးဆေးခန်းဘေးလမ်း ၁၀ မိုင် ၆၀*၈၀ ...
3,800 Lakh 3800 ညှိနှိုင်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံဆောက်လုပ်ရန်၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ ...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံဆောက်လုပ်ရန်၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် အထူးသင့်လျှော်သည်။ သီးပင်စားပင်မျိုးစုံ စိုက်ပျိုးထား၊ လမ်းမဘေး၊ ဈေးနှင့်နီး၊ ကားဂိတ်နှင့်နီး၊ ...
2,000 Lakh ညှိနှိုင်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် ဆီဆိုင်ဖွင့်ရန် ...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် ဆီဆိုင်ဖွင့်ရန် အထူးသင့်လျှော်သည် ...
1,200 Lakh ညှိနှိုင်း
တ/ဒဂုံ လှော်ကားလမ်းမကြီး ဒဲ့ဝင် လမ်းကျယ်ပေါ် 41×65 သိန်း800
တောင်ဒဂုံ၏အဓိက ကြောရိုးသဖွယ်ရှိသော အထူးစည်ကားသည့် လှော်ကားလမ်းမကြီး (ယခု ...
တောင်ဒဂုံ၏အဓိက ကြောရိုးသဖွယ်ရှိသော အထူးစည်ကားသည့် လှော်ကားလမ်းမကြီး (ယခု ၂လမ်းသွားမှ ၄လမ်းသွား လမ်းချဲ့ခင်းနေသည်) မှ ဒဲ့ဆင်း ချမ်းမြသာစည်လမ်းကျယ်ပေါ် 57ရပ်ကွက် အမှတ်1331 ခြံအကျယ်41′x65′ အုတ်တံတိုင်းခတ် ပါမစ်ခြံကွက်(လမ်းခင်းရန် မြေတိုင်းထားပီး အလားအလာကောင်း)။ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် မီးတားကွက်ရှိခြင်းကြောင့် ...
အဖိုးတန် အခွင့်အရေး ( ပေ ၂၀ + ပေ ၆၀ ) မြေ
ရဲစခန်း၊ ဆေးရုံ ၊ မူကြိုကျောင်း ၊ ...
ရဲစခန်း၊ ဆေးရုံ ၊ မူကြိုကျောင်း ၊ ဘတ်စ်ကားဂိတ် များ အနီးတွင် တည်းရှိပီး ၊ အထက်တန်းကျောင်းကို မျက်နှာမူထားကာ ၊ VIP ကွက်များနှင့် နီးကပ်စွာ တည်ရှိပီး ၊ ရပ်ကွက်သန့် လူနေသန့်သော ...
350 Lakh တခွန်း
ဧရာဝတီတိုင်း၊ပန်းတနော်မြို့ ရှိ 75′ x 144′ ...
ဧရာဝတီတိုင်း၊ပန်းတနော်မြို့ ရှိ 75′ x 144′ အကျယ်အ၀န်းရှိ ဥယျာဉ်ခြံမြေအမျိုးအစား၊ ဂရန်အမည်ပေါက်။ ...
200 Lakh ညှိနှိုင်း
Land for sale (demo)
This is demo posting ...
တောင်ဒဂုံ ပုဂံ လမ်းမပေါ်ရှိ မြေကွက်နှင်.ဆိုင်ခန်း အမြန်ရောင်းမည် သိန်း၁၀၅၀
တောင်ဒဂုံ ၅၆ ရပ်ကွက် လှော်ကားလမ်းမဒဲ.ဆင်း ပုဂံလမ်းက ...
တောင်ဒဂုံ ၅၆ ရပ်ကွက် လှော်ကားလမ်းမဒဲ.ဆင်း ပုဂံလမ်းကျယ် ၄၀x၆၀ မြေကွက် နှင်. ဆိုင်ခန်း၎ ခန်း အမြန် ရောင်း မည် ဂရံ အမည်ပေါက် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် သိန်း၁၀၅၀ နှင်. အမြန် ...
» စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆီဆိုင်၊ငါးကန်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အထူးသင့်လျှော်သော » ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်း၊၁၃မိုင်/၂ဖာလုံ၊ ...
» စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆီဆိုင်၊ငါးကန်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အထူးသင့်လျှော်သော » ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်း၊၁၃မိုင်/၂ဖာလုံ၊ လမ်းမမေးတင်၊မေးတင်(၁)ဧက၊အကျယ်(၆.၅)ဧက၊ »ခွဲမရောင်းပါ၊ » အကျိုးဆောင်/ပွဲစားများဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ...
150 Lakh ညှိနှိုင်း
» စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊စက်ရုံအလုပ်ရုံ၊စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အထူးသင့်လျှော်သည်။ » မြေ(၅)ဧက၊နှစ်(၃၀)ဂရံလျှောက်ထား၊ဧကခွဲရောင်းသည် ...
» စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊စက်ရုံအလုပ်ရုံ၊စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အထူးသင့်လျှော်သည်။ » မြေ(၅)ဧက၊နှစ်(၃၀)ဂရံလျှောက်ထား၊ဧကခွဲရောင်းသည် » အကျိုးဆောင်/ပွဲစားများဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ...
300 Lakh ညှိနှိုင်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံဆောက်လုပ်ရန်၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် အထူးသင့်လျှော်သော လှည်းကူးမြို့နယ် ...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံဆောက်လုပ်ရန်၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် အထူးသင့်လျှော်သော လှည်းကူးမြို့နယ် မလေးရှားပိတောက်အပင်(၄၀၀၀)၂နှစ်သား၊ ကျွန်းအပင်(၁၅၀၀)၂နှစ်သား၊ ရန်ကုန်-နေပြည်တော်အမြန်လမ်းနှင့်နီး၊ ...
2,500 Lakh ညှိနှိုင်း
မြန်မာပြည်တွင်း အိမ်ခြံမြေကြော်ငြာများ အခမဲ့တင်နိုင်ရန်၊တစ်နေရာတည်းတွင်အမြန်ဆုံးနှင့် အလွယ်ကူဆုံးရှာဖွေနိုင်ရန်၊ ရောင်းသူဝယ်သူ အကျိုးဆောင်များတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားသော မြန်မာ့အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်
No.131, Room 2B, Baho Road, Kamayout Township, Yangon
နှစ်ထပ်အိမ်ငှားရန် (demo) 50 Lakh ညှိနှိုင်း
တိုက်ခန်းငှားမည် (demo)3Lakh လစဉ်
Copyright Myanmar Realestate Portal, www.realestate.com.mm